xow: onye njikwa Linux maka Xbox One njikwa | Site na Linux
Isaac | | GNU / Linux, Egwuregwu
Ọ bụrụ na egwuregwu na-amasị gị ma ị bụ otu n'ime ndị na-ahọrọ iji Xbox One njikwa gị maka egwuregwu gị, nke a ga-amasị gị. Onye njikwa Microsoft amaara ama, Xbox One Controller, nwere a Linux na-adọrọ mmasị ọkwọ ụgbọala a na-akpọ xow. Ebumnuche a gụnyere ịgụnye nkwado maka ọtụtụ ụdị dị iche iche na ụdị nke ndị na-achịkwa egwuregwu. Ugbu a ị nwere ike iji nke kachasị ọhụrụ ewepụtara, xow 0.3.
Ọ bụ ezie na ọ ka bụ ọkwọ ụgbọala na-eto eto, eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na oge ọ bụla ọ na-etinye ọnụ atụmatụ ndị ọzọ. Na ntọhapụ ikpeazụ a etinyela ọrụ niile zuru ezu, gụnyere ndị na-akpali iwu, iwu udev ka ọ ghara ịchọ ihe ùgwù mgbọrọgwụ, agbakwunyere ebumnuche ọhụrụ maka anamfile ka enwere ike iwepụ ya ngwa ngwa, nkwado maka Xbox Otu njikwa Elite, wdg.
xow nwetakwara ezigbo ọrụ site na onye nrụpụta ya mezie nsogbu ụfọdụ na o nwere na ya gara aga version. Dịka ọmụmaatụ, mbipute 0.3 agaghịzi akpata nsogbu ndakọrịta na onye ọkwọ ụgbọala Linux kernel mt76, ya bụ, onye ọkwọ ụgbọ ala maka netwọki ikuku maka ngwaọrụ MediaTek. N'otu aka ahụ, nsogbu nsogbu ahụ mgbe ịkwụsị njikọ dongle n'oge ijikọ edozila.
Dabere na ndị nwara ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọbụlagodi na ọnọdụ ikuku maka ndị na-ahụ maka Xbox One Controller nke ụdị 1697, 1698 na 1708. Nke a na-eme ka enweghị nkwado gọọmentị maka ikpo okwu Linux nke nwere ụdị ndị njikwa a, na nke emere ka ọ dịrị site na ọrụ nke onye nrụpụta. Ya mere, ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu vidio ha n'ụzọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị xow, lee ị nwere ike gaa na saịtị GitHub ha, ị nwere ike ịnwale ya ma hụ otú o si arụ ọrụ, yana enyemaka ma ọ bụrụ na ịchọta nsogbu. Agbanyeghị na iburu n'uche na ọ ka nọ na mbido ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Egwuregwu » xow: onye njikwa Linux maka Xbox One njikwa
Troubleshoot Steam Games na ndị Nvidia ọkwọ ụgbọala